Ciidamadda Amaanka DFS oo howlagalo sameyaay – Radio Daljir
Ciidamadda Amaanka DFS oo howlagalo sameyaay
Agoosto 1, 2018 11:17 b 0
Hay’adaha ammaanka degaanka Garasbaaley ayaa gacanta ku dhigay nin xalay fiidkii Bambada gacanta laga tuuro ku weeraray xarunta maamulka Garasbaaley, duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Ragga weerarkan geystay oo ahaa Laba qof ayaa waxa ay Bambo gacmeed ku tureen xarunta Garasbaaley, intaasi kadib ayaa waxaa ku baxay ciidanka ammaanka oo markii horeba ku jiray feejignaan, waxaana suuragashay in gacanta lagu dhigo mid ka mid ah raggaasi.
Saraakiisha ammaanka qaabilsan ayaa waxa ay sheegeen ninkan ay gacanta ku dhigeen in isla xalayba ay u gudbiyeen saldhig galbeed ee degmada Dharkeynley, halkaasi oo su’aalo lagu weydiinayo.
Waxay kaloo sheegeen saraakiisha ammaanka in ninkan uu ka tirsan yahay Ururka Al Shabaab, islamarkaana ay ciidamada ku daba jiraan ninkii kale ee la socday shaqsiga ay hada Hay’adaha ammaanka gacanta ku hayaan.
Guddoomiyaha degaanka Garasbaaley Ibrahim Maxamed Rooble ayaa xaqiijiyay in aanay jirin khasaare ka dhashay weerarkaasi, marka laga reebo burbur yar oo soo gaaray darbiga ay Bambada ku dhacday.
Guddoomiye Ibraahim ayaa ciidamada ku ammaanay hawlgalka ay ku soo qabteen ninkan, wuxuuna ku dhiirageliyay inay sii laba jiraabaaraan shaqadooda, si degaanka nabad uu u noqdo.
Dowladda Jabuuti oo beenisay in Madaxweynaha jabuuti uu Asmara ku laban doono